यी तीन मन्त्री - जसले राज्यको सम्पति स्वाहाँ पादैंछन ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	यी तीन मन्त्री - जसले राज्यको सम्पति स्वाहाँ पादैंछन ! » Nepal Fusion
यी तीन मन्त्री – जसले राज्यको सम्पति स्वाहाँ पादैंछन !
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका तीन मन्त्री बिना मगर, पद्मा अर्याल र बर्षमान पुन निकै बिबादित बनेका छन् । उनीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयमा आर्थिक पार्दसिता नभएको आरोप उनीहरुले खेपिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समेत यी तीन मन्त्री देखि असन्तुष्ट रहेको बालुबाटार स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीमण्डल पुनः गठन गर्दा यी तीन मन्त्रीहरुको समेत हेरफेर हुन सक्ने आसंका नेकपा नेताहरुले गरेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भेटिएको छ । कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ । मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । महालेखाका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्र पाँच अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ । मेलम्चीका नाममा अहिलेसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आयोजना निर्माण ९सिभिल वर्क०मा भने १७ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च गरिएको छ । प्रशासनिकतर्फ ७२ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालसहितको टोली सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर फर्कदा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । मन्त्रीको टोली वैशाख २८ गते सगरमाथा बेस क्याम्प पुगी त्यसै दिन साँझ काठमाण्डु फर्केको थियो । टोलीले त्यतिबेला बेस क्याम्पमा झन्डै एक घन्टा कार्यक्रम गरेको थियो । नेपाली प्राविधिकहरु सगरमाथाको मापनमा रहेका बेला अनुगमनका नाममा मन्त्रीसहितको टोली तीनवटा हेलिकोप्टर लिएर बेस क्याम्पमा पुगेको थियो । काठमाण्डुबाट लुक्लासम्म जहाजमा पुगेको टोली त्यहाँबाट भने नेपाली सेना र सिम्रिक एयरका हेलिकोप्टरमा लिएर फर्किएको थियो । सगरमाथाको मापनका लागि भन्दै नापीद्वारा भाडामा लिइएका सिम्रक एयरका दुईवटा हेलिकोप्टर मन्त्रीको टोलीका लागि प्रयोग भएका थिए ।
सरकारी निवासमा बसेर घरको भाडाँ पनि लिनु सबैभन्दा ठुलो लाजमर्दो कुरा हो । धेरै सांसदले घरभाडाँ फिर्ता गरेको बताए पनि यो जोडि भने चुप–चाप बस्यो । जनताको करबाट आएको पैँसा पचायो । यो काण्डले आलोचित बनेका मन्त्री बर्षमान पुन र उनकी श्रीमती ओनसरी घर्ती । पछिल्लो पटक मन्त्री पुनले राज्यको सम्पतीमा आफन्त र पिएलाई बिदेश भ्रमर्ण गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उनी गृह जिल्ला पुग्दा समेत हेलिकप्टरमै जान्छन, उनी चढ्ने हेलिकप्टरको स्रोत थाहा नभएको नेकपाका नेताहरुको भनाई ।